Iprofayili Company - Ningbo Beilun Daqi Hongxiang Ikubumbe Co. Ltd
inkampani yethu onceda abantu kuyilo mveliso zonke iintlobo sande & bafe-bephosa inxalenye & ngenaliti iplastiki inxenye. Kuye kudlule ISO9001: 2015 umgangatho kumazwe ngamazwe kwinkqubo ububhali.
Siye ezizodwa iqela kuyilo ukubonelela kuyilo kwaye yonke idatha zobuchwepheshe. Kukho eziphambili kakhulu Imbaleki Ukulinganisa software: JSCAST-VER13 of Japan, Germany daka, zokuhlalutya ngezisombululo uyilo inkqubo, kunye rahman, CAM kunye 2D / 3D software professional uyilo: Cad, UG kunye Pro / E.
Isixhobo oluphambili:-high speed CNC umatshini, CNC Umatshini uyila, EDM, ucingo ukusika umatshini, afe umatshini zokubona (200T), lathe, umatshini lokusila, CMM, umatshini, izinto sokubumbela emincinci analyzer, izinto tshin, isixhobo lukhuni test, spectrograph, njl
"Customer, Umgangatho kunye Ukunyaniseka kuqala" i siseko wethu.
"Uyilo Advanced, isakhiwo inoveli, ngqo eziphakamileyo, izinto esemgangathweni, ubomi obude, elifutshane ixesha unikezelo" kukho iimpawu zethu imveliso.
Thina ndisoloko ndifuna ukwenza zonke iinkcukacha ngononophelo, ulisebenzisa inxenye ekumgangatho ophezulu, kwaye senza konke okusemandleni ethu ukunceda abathengi ukuba okhuphisana ngcono emarikeni, ngoko kuwe ukuthi win-win, ukudala brilliance kunye!
Inyaniso kufuneka kubonakele ngokusebenzisa amehlo abo, wamkelekile inkampani yethu. Nikholwe ukuba iimveliso zethu kunye nenkonzo ziyakhuphisana! Ukuba unomdla kuthi, nceda ungathandabuzi kwaye uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.